Vahoaka Malagasy Mila tezaina hifantoka amin�ny foto-tsakafo hafa
Nivoaka tamin�ny fahanginana indray omaly Rabenitsara Lita, filohan�ny fikambanana mpiaro ny zon�ny mpanjifa RNDC.
Nambarany fa tsy ny vary ihany no foto-tsakafon’ny Malagasy fa azo atao tsara ihany koa ny mihinana katsaka…Tokony hampidirina anaty fandaharam-pianaran’ny mpianatra mihitsy izany entina hanabeazana ny tsirairay hisorohana ny olana mitranga tahaka izao fiakaram-bidin’ny kapoakam-bary efa ho 600 Ar izao. Nomena hafatra ihany koa ny mpitondra fanjakana. Anisan’ny noresahiny manokana ny tokony hanamboarana ny lalana rehetra any amin’ireo toerana be mpamoka-bary na sompitr’i Madagasikara toy ny any Ambatondrazaka, Andapa, Ambatoboeny…fa tsy variana fotsiny amin’ny fanentsemana ireo lalana misy lavadavaka eto an-drenivohitra ny mpitondra na manenjika ireo faritra be olona mba hanaovany propagandy. Mikasika ireo vary nafarana avy any ivelany mba hamenoana ny banga eto an-tanindrazana manokana dia miantso ny rehetra mba ho mailo Rabenitsara Lita sao sanatria vary efa tsy azo hanina intsony mitovy amin’ny provandy no haparitaka eny an-tsena eny.